Brocade Smart Space Technology Co., Ltd. waa shirkad muhiim ah oo ka diiwaan gashan Gobolka Sichuan, Shiinaha, waxayna qayb ka tahay barnaamijka maalgashiga weyn ee aaga Tech Tech ee Chengdu. Alaabooyinkayagu badanaa waxay kujiraan qeexitaano fiidiyow oo qeexan oo heer sare ah iyo qeybiyeyaal, iyo qeexitaan sare oo aan burburin masaafada-dheer ee alaabada gudbinta waqtiga-dhabta ah.
Tiknoolajiyada aasaasiga ah ee madax-bannaan ee warshadaha iyo cilmi-baarista waarta iyo awoodaha horumarineed, oo leh dhowr shati-abuur iyo alaabooyin cusub oo shatiyeysan. Breakthrough-waqtiga dhabta ah ee tikniyoolajiyada gudbinta maqalka iyo muuqaalka sare ee qeexitaanka-qeexan sida qeexitaanka sare, xallinta sare, dib-u-dhaca eber, isticmaalka tamarta oo hooseeya, masaafada dheer, iwm, ayna ka go'an tahay inay siiso qalab xirfad iyo xalal macaamiisha adduunka.
Alaabooyinka taxanaha ah ee Brocade Zhizhi badanaa waxay ku lug leeyihiin qeexitaan sare oo luminta masaafada dheer-waqtiga-dhabta ah, iyo sidoo kale qeexitaan sare oo maqal iyo muuqaal ah oo loo beddelo iyo qaybinta. Waxaa si weyn loogu adeegsadaa HDMI warshadaha maqalka-muuqaalka, barida warbaahinta badan, fiidiyowga iyo shirarka taleefanka, bandhigyada shaashadaha waaweyn, bandhigyada, dhaqaalaha iyo cilmi baarista sayniska, iyo filimka iyo telefishanka toogashada iyo meelaha kale ee taagan.
Ujeeddada laga leeyahay si loo dhiso shirkad hal-abuur heer sare ah.